काठमाडौं, २१ फागुन । शिवरात्रि भन्नासाथ पशुपतिनाथको चर्चा हुन्छ र पशुपतिनाथ भन्नासाथ विभिन्न भावभंगी र स्वरुपका बाबाहरु । कोही नाङ्गा बाबा, कोही अर्धनाङ्गा । भाङ धतुरोको नशामा लठ्ठ बाबाहरु ।
यी बाबाहरुको चर्चा हुनासाथ सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न बहस चौतारीहरुमा आलोचना र विवाद सुरु हुन्छ ।
यसपालिको शिवरात्रि सकिएको छ । सोमबार सकिएको शिवरात्रिबारे सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि बहस छ । यही बहसमा बाबा अर्थात् साधुहरुबारे अग्रज सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतको स्ट्याटस पनि चर्चामा छ । उनले साधुको अर्थ र औचित्यबारे धारणा राखेर साधुलाई सम्मान गर्नुपर्ने मत राखेकी छिन् ।
हामीले यहाँ बस्नेतको स्टाटसको साथमा सञ्चारकर्मी सुमी दर्लामी मगरले क्यामरामा कैद गरेकी पशुपतिका साधु र शिवरात्रिका केही तस्बिरहरु प्रस्तुत गरेका छौं-
बबिता बस्नेत- (स्टाटस-१)
शिवको अर्थ शून्य हो । जीवन शून्यबाट सुरु भएर शून्यमैं अन्त्य हुन्छ । भगवान शिव ध्यानका सुरुवातकर्ता हुन् । ध्यान जसले मानिस भित्रको ब्रम्हाण्डलाई बुझ्न मद्दत गर्छ । मानिस ब्रम्हाण्डमा बस्ने प्राणी मात्र होइन स्वयंमा ब्रम्हाण्ड हो ।
शिवको अर्थ संभावना पनि हो । शिव ध्यान मार्फत् संभावनाहरुको खोजी गरी जीन्दगीलाई अनुभव गर्ने यो संसारमा पहिलो व्यक्ति हुन । शिव समानताका प्रतिक हुन, अर्धनारेश्वर स्वरुप यसको प्रमाण हो । अर्धनारेश्वरको अर्थ आधा नारी आधा पुरुष या भनौं महिला पुरुष बराबरी भन्ने हो । एउटै मानिसमा Femininity र Masculinity हुन्छ भन्ने कुरा भगवान शिवले त्यतिबेलै आफ्नो स्वरुपमार्फत् दर्शाएका थिए ।
शिव कृष्णजस्तो दार्शनिक होइनन्, व्यवहारिक पात्र हुन् । लामो समय अन्तरध्यानमा रहने हुँदा कतिले अव्यवहारिक पनि भन्लान् । तर उनले आँखा चिम्लिएर जीवनको गहिराइलाई बुझ्न सिकाए । महादेवको तेस्रो आँखालाई जीन्दगीप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणका रुपमा लिइन्छ । ‘धन देखेपछि महादेवका पनि तिन नेत्र’ भन्ने नेपाली उखान पूर्णतः गलत अर्थमा प्रयोग भई रहेको छ । महाशिवरात्रीको उपलक्ष्यमा मुखले शिव शिव मात्र नभनेर महादेवको खास अर्थ बुझि ब्यवहारमा प्रयोग गरौं !!
बबिता बस्नेत- (स्टाटस-२)
महाशिवरात्री मनाउन पशुपति आएका साधु बाबाहरुप्रति लक्षित गरेर अनेक टिका टिप्पणीहरु गरेको पाइयो । कतिले गणतन्त्रमा पनि साधुका अनेक रुप हेर्नु पर्ने ? भने, कतिले लखेट्नु पर्छ र कतिले चाँहि अर्को बर्षदेखि उनीहरुको प्रवेश निषेध गर्नुपर्छसम्म लेखेको देखियो ।
साधु हुनका लागि एउटा मान्छेले के के त्याग गर्नुपर्छ भनेर जब मानिसले सोच्न र बुझ्न थाल्छ त्यसपछि मात्रै साधु सन्तप्रतिको सम्मान बढ्ने हो । साधु हुनु सानोतिनो कुरा होइन, कुनै पनि मानिस जब आफ्नो अहंमा प्रहार हुँदा पनि चुपचाप सहन सक्छ तब उ साधु बन्छ । जीवनको उच्चतम तहमा पुगेका मानिसहरुका बारेमा गरिने हल्का फुल्का टिप्पणीले बुझाइको स्तर मापनमा मद्दत बाहेक अरु केही गर्दैन ।